Homeसमाचारमंगलबार हनुमानको पूजा किन गरिन्छ, पूजा गर्नुका यस्ता फाईदा
October 6, 2020 admin समाचार 10019
मान्य’ताका अनुसार मंग’लबारको सम्बन्ध मंगल ग्रहसँग हुन्छ ।यस दिन’लाई हनुमान जीको दिन पनि भनिन्छ । यस दिनलाई मं’गलको उर्जा पनि मानिन्छ । संकटको स’मयमा मानिसको उर्जा हानी हुने गर्छ । सोही मान्य’ताका अनुसार यस दिन हनु’मानलाई प्रशन्न पार्ने काम गरिन्छ ।
मंग’लबारका दिन के गर्ने ?
मंग’लबार अवश्य राम मन्दिर जानुहोस् । मं’गलबार हनुमा’नजीको दर्शन गर्दा मानि’समा नयाँ उर्जा पैदा हुन्छ । एउटा धा’गोमा खुर्सानी माथि, बीचमा कागती र तल पनि खुर्सानी राखेर कुनै व्यवसाय गरेको ठाउँ वा घरको ढो’कामा राख्नुहोस् । यसले नक’रात्मक काम’हरुलाई समाप्त पार्ने गर्छ ।
मंगल’बार बेलुका हनुमान जी’लाई गुलाब चढाउ’नुहोस् । यसले जीव’नमा रहेका समस्या समा’धान गर्छ । मंगल’बार जहिले पनि राम’स्तोत्र पढ्ने गर्नुहोस् जसले गर्दा शुभ कामको थालनी गर्दा फल’दायी हुने वाता’वरण निर्माण गर्छ । शुद्ध ध्यु वा तेलको बत्ती बाल्नुहोस् र मात्रै हनुमान चालिसा पढ्नुहोस् । यसले तपा’ईको मनका’मना पुर्ण गर्ने वि&श्वास मानिन्छ ।
मंग’लबार बिहान बच्चाको सिरा’नीमा फि’टकरी राखिदिनुहोस् । जो सुत्दा ड’राउने बच्चा छन् त्यस्तो स’मस्या समा’धान हुन्छ । मंगलबार अवश्य राम मन्दिर जानु’होस् । मंग’लबार हनुमा’नजीको दर्शन गर्दा मा’निसमा नयाँ उर्जा पैदा हुन्छ । एउटा धा’गोमा खुर्सानी माथि, बीचमा कागती र तल पनि खुर्सानी राखेर कुनै व्यवसाय गरेको ठाउँ वा घरको ढोकामा राख्नुहोस् । यसले नक’रात्मक कामह’रुलाई समाप्त पार्ने गर्छ ।
मंग’लबार बेलुका हनु’मान जीलाई गुलाब चढा’उनुहोस् । यसले जीवनमा रहेका स’मस्या समाधान गर्छ । मंग’लबार जहिले पनि राम’स्तोत्र पढ्ने गर्नुहोस् जसले गर्दा शुभ कामको था’लनी गर्दा फलदायी हुने वातावरण निर्मा’ण गर्छ । शुद्ध ध्यु वा तेलको बत्ती बाल्नुहोस् र मात्रै हनुमान चालि’सा पढ्नुहोस् । यसले तपाईको मनका’मना पुर्ण गर्ने विश्वास मानिन्छ ।
मंग’लबार बिहान बच्चाको सिरा&नीमा फि&टकरी राखि’दिनुहोस् । जो सुत्दा डराउने बच्चा छन् त्यस्तो समस्या समा’धान हुन्छ । -खबरहब बाट
धर्म शास्त्रानुसार मंगलबारको दिन भुलेर पनि गर्न नहुने यी कामहरु ! हेर्नुहोस् :
किन पत्रकार ऋषि धमला लाईभ कार्यक्रममै धुरु’धुरु रोए ? हे’रौ भिडियोमा
May 14, 2021 admin समाचार 4135
पत्रकार ऋषि धमला देखिदा जति ठ’ट्यौलि शैलिका छन् उत्तिनै भाव’नात्मक पनि छन् । पछिल्लो एक अन्तर्वा’र्तामा उनी धुरुधुरु रोएको भिडियोले पनि के देखाउँछ भने धमाला निकै से’न्टिमेन्टल छन् । प्राइम टेलिभिजनबाट प्रसा’रण हुने ‘जनता जान्न
September 16, 2020 admin समाचार 11886
चौधरी ग्रुपको नवलपरासीस्थित बि’यर फ्याक्ट्रीमा भीषण आग’लागी
June 2, 2021 admin समाचार 3192
नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को दुम्कौ’लीमा रहेको चौधरी उद्योग ग्रामको बियर प्लान्टमा आग’लागी भएको छ । आज बिहान अचा’नक भएको आग’लागी नियन्त्र’णका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीसहित तीनवटा वारुणयन्त्र (दमकल) प्रयोग गरि’एको छ । आगलागीका का’रण
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (220334)